Mitaky ny mangarahara amin` ny vola miditra sy mivoaka izy ireo amin` izao fiatrehana krizy ara-pahasalamana izao. Fomba iray ahafahana mametraka fahatokisana sy fanajàna eo amin` ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy izany, hoy ny fanambarana. Misy tokoa ny ezaka ataon` ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombon` antoka, hoy ny PFNOSCM. Etsy ankilany anefa, mahatsikaritra izy ireo fa misy fahataràna ny fandraisana fanapahan-kevitra ara-politika teo amin` ny fanidina ny sisin-tany teto amintsika sy tsy fifehezana ny fihibohana tamin` ireo mpandeha avy any ivelany, izay fototry ny krizy ara-pahasalamana iainantsika izao. Noho izany, nanantitrantitra ity vondrona ity fa ny paikady entina miady amin` ny fihanakin` ny aretina amin` ny alalan` ireo fitaovam-pitiliana dia somary misy fetrany ihany manoloana ny isan` ny marary sy ny faritra misy azy. Izany hoe, mety hiteraka fahadisoana eo amin` ireo antontan` isa sy paikady apetraka iadiavana amin` ny aretina. Ireo fepetra noraisina mba hisorohana ny aretina sy mba hampitony ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy dia tsy mifanaraka amin` ny zava-misy tena iainana, hoy hatrany ny fanazavana. Porofoin` izany, ny fanoherana sy fahasorenana eo amin` ny vahoaka noho izay olana ara-toekarena sy ara-tsosialy aterakin` ny fihibohana aminà faritra voakasika eto Madagasikara. Etsy andaniny, mahatsikaritra ihany koa ny PFNOSCM fa tsy misy tamberin`andraikitra ara-tsosialy eo amin` ny fihaviana sy fampiasana ireo vola sy fitaovana entina miatrika ny krizy ara-pahasalamana. Mitaky fampahafantarana matetika ho an` ny besinimaro ireo teboka ireo amin` ny alalan` ny tatitra na amin` ny haino aman-jery na koa tambajotra serasera sy peta-drindrina, izy ireo, noho izay fanjakana tsara tantana izay.